CodeWeavers Inoburitsa CrossOver 17.1.0 yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Takatotaura nezvekuuya kwe Waini 3.0 Iine yakawanda yekuvandudza mune inoenderana dura yeyazvino Microsoft Windows software mune Unix-senge anoshanda masystem akadai seSolaris, Linux, macOS uye izvozvi, sekuziva kwako, Android inowedzerwawo kune yakanyorwa mune iri bazi nyowani. Naizvozvo unogona kumhanyisa Windows mafomu pane yako smartphone uye piritsi. Asi mune ino chinyorwa isu hatichataura nezve iyi yemahara software chirongwa, asi neimwe iine hukama zvakanyanya, ndokuti CrossOver, mukoma muridzi wayo.
Iwe unofanirwa kunge uchitoziva kuti ichi chinobva paWine ine akati wandei zvigamba uye tweaks mune yayo sosi kodhi iyo yakawedzerwa kune ino yakavanzika vhezheni matinogona kuwana zvimwe zvakanakira pamusoro peiyo LGPL vhezheni yekutenda kune yakawedzera basa rinoitwa ne CodeWeavers. Chero zvazvingaitika, mapurojekiti ese ari maviri anochengetwa, sezvo Waini ichibatsirwawo nemipiro yeCodeWeavers uye vamwe vevamiririri veiyo yemahara chirongwa vanogamuchira muhoro kubva kukambani iyi. Zvakanaka, ikozvino tinogona kunakidzwa CodeWeavers CrossOver 17.1.0 zvese mushanduro yayo yemacOS uye yeGNU / Linux. Iyo nyowani inoenderana dura ine chaiyo yekuvandudza kune mamwe anozivikanwa mafomu, kuti ugone kuwana yazvino vhezheni nekuirodha pasi kubva iyo webhusaiti yepamutemo uye edza izvi zvitsva iwe pachako. Semuenzaniso, mune ino vhezheni ya2018 isu tine kuti inoenderana neQuicken 2018 uye Hofisi 2016 mushure mekugadzirisa mamwe matambudziko ane chekuita nekutangwa kwemisangano yeiyo itsva Microsoft hofisi suite.
Iye zvino vashandisi ve Office 365 ivo vachakwanisa kunyoresa pasina matambudziko uye kunakirwa Hofisi mune yazvino vhezheni isina matambudziko. Kana dziri dzimwe nhau dzasara, ndedzemunhu mudiki uye isu tinogona kuwana zano nekutarisa izvo Waini 3.0 inounza kuziva izvo CrossOver 17.1.0 inogona kutisvitsa. Ingo wedzera kuti isu ticharamba takaterera kune inotevera nhau yezvose zvemahara uye zvakavanzika chirongwa mune ramangwana kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows » CodeWeavers inotangisa yayo CrossOver 17.1.0 yeLinux
John Ribeiro akadaro
Pindura Juan Ribeiro